Izindaba - Ungazixuba Kanjani Ama-Adhesives Angena-Solvent?
Ungayihlanganisa Kanjani i-Solvent-Free Adhesives?
Okwamanje kunezinhlobo ezimbili zokunamathela okungenamakhemikhali zezinhlanganisela zokupakisha eziguquguqukayo, izingxenye ezilodwa nezimbili. Ingxenye eyodwa isetshenziselwa iphepha kanye nama-nonwovens, angaqhutshwa ngaphandle kokuxuba futhi ngaphandle kokulungisa isilinganiso. Izingxenye ezimbili zingasetshenziselwa ifilimu lokupakisha eliguquguqukayo elihlukahlukene. Ngokuya ngokuhlangenwe nakho komuntu siqu, leli khasi lizochaza ukuthi ungashintsha kanjani isilinganiso sezinto ezimbili ngezinhloso ezihlukile nokuthi sisebenza kanjani.
Okokuqala, isilinganiso sokuxuba se-solvent-free laminated binders senzelwe.
Kunezici ezintathu kumklamo wesilinganiso senhlanganisela yokunamathela okuncibilikisayo okungenalutho:
1. Zama ukufanisa isilinganiso senhlanganisela yezingxenye ze-A & B nesisindo.
Isilinganiselo sokuxuba i-A / B sinenzuzo yokuba nesisindo esifanayo. Isibonelo, i-X iyi-100A exutshwe ne-90B, Y ingu-100A no-50B. Ukushintshwa okungu-1% kuka-B kuzoholela ekushintsheni kwesisindo esingu-1.1% kwesakhi esingu-A no-2% sika-Y. Ngokuvamile, ushintsho olungu-2% kunani lokuxubana luyamukeleka ngesikhathi senqubo yokukhiqiza, okuholela ekushintsheni kwesisindo esingu-2. 2 % no-4%. Uma isisindo sabo sihluka kakhulu, lokhu kungaholela kokubi okulandelayo:
(1) Izinto ze-A / B kunzima ukuzixuba kahle ukuze ingxube ibe manzi ngendlela engajwayelekile.
(2) Ngenxa yokungabikho kwengxenye B, ingcindezi yesixubi iphansi kakhulu ukuqinisekisa ukugeleza okujwayelekile, okuholela ekuchezukeleni kokunamathela kanye nokwehla komkhiqizo.
2. Kusondele ngangokunokwenzeka ku-viscosity yezingxenye ze-A & B
Ukwehla kwe-viscosity yengxenye A & B ezingeni lokushisa elifanele, kuba ngcono umphumela wokuhlangana. Uma ucabangela isenzo se-binder, i-viscosity yasekuqaleni yazo zombili izingxenye ihluke kakhulu. Izinga lokushisa kufanele lilawulwe ngokwehlukana ukulungisa inani le-viscous. Ukunyusa izinga lokushisa kwengxenye yokuqala nge-viscosity ephezulu kuyenza isondele kwenye ingxenye, futhi inenzuzo kuwo womabili amamitha wokuxuba kanye nepompo yokukhipha.
3. Ukwandisa ukubekezelelana kwengxube ye-A & B
Ngenxa yezici ezithile zangaphandle zokunamathisela, kufanele kube khona ukuphambuka kokuxuba isilinganiso. Ukunweba ukubekezelelana kwenhlanganisela yenhlanganisela ye-A / B kunganxephezela ngempumelelo imiphumela emibi yalokhu kuphambuka. Isibonelo, i-solvent evamile yokunamathela kwamahhala i-WD8118A / B yezinto ezintsha ezisukela enhlanganisweni ejwayelekile ye-100: 75 kuya enhlanganisweni ye-100: 60 - 85, zombili ezamukelekayo ekusetshenzisweni futhi zamukelwa kahle ngamakhasimende amaningi.
Okwesibili, umgomo nendlela yokuxuba ukulungiswa kwesilinganiso
(1) Kwenzelwe ukushisa kuma nomswakama
Ngokuvamile, okuqukethwe kwe-NCO engxenyeni A kuphakeme, kanti ukusabela komoya nomphunga kwifilimu kungakwesobunxele. Kodwa-ke, phakathi nezinyanga zasehlobo, lapho kunomswakama omningi emoyeni futhi ifilimu inomswakama ophakeme kakhulu, ingxenye A kufanele inyuswe ukuze idle umusi omningi, ozosiza ukusabela okufanele kokunamathiselwe.
(2) Kwenzelwe okokusebenza kukayinki kanye nezinsalela ze-solvent
Ukupakisha okuningi okuguquguqukayo kuyifilimu ephrintiwe, inqubo yokuphrinta yasekhaya inokuphrinta kwe-ink kuphela. Kuma-inks asetshenziswa kuphela njenge-additive kuzoba ne-diluent ne-retarder, womabili uhlelo lwe-polyurethane resin, ku-adhesive ne-reaction ye-NCO kungadla i-NCO ethile.
Sikhathazekile ngobumsulwa nokuqukethwe umswakama we-solidual solvent. Zizohlala zingaphansi kokuphrintiwe, kuthi i-hydrogen esele isebenzise i-NCO ethile. Uma izinsalela ezincane nezinama-retarder ziphakeme, singangeza ingxenye A ukuthuthukisa imiphumela.
(3) Kwenzelwe ukudluliswa kwe-aluminium
Izinto eziningi zokupakisha eziguquguqukayo sezikhanyisiwe, futhi umphumela wengcindezi kokumbozayo ungancishiswa ngokulungisa isilinganiso sokuxubana sezinto ze-A / B ukuzithambisa, ngokuvamile kukhulisa ingxenye ye-B ngokufanele futhi kunciphise ukudluliswa kombuso kwe-aluminium ngokusebenzisa iziphikisi zokungenelela .